ခိုင်ထူး | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / ခိုင်ထူး
Category Archives: ခိုင်ထူး
မိုးရဲရင်ဆောင်းရဲရမယ် – ခိုင်ထူး
၀၁. လေကုန်ရေခမ်း ၀၂. ပန်းဥယျဉ်သစ် ၀၃. အိမ်အလွမ်း ၀၄. မြတ်သောအကျင့် ၀၅. ပြတ်သားစမ်းပါအချစ်ရယ် ၀၆. မိုးရဲရင်ဆောင်းရဲရမယ် ၀၇. လေးမျှားတစ်လက်နဲ့ သီချင်းသည် ၀၈. မဆုံးတဲ့သစ္စာ ၀၉. နေရာဟောင်းမှာ ၁၀. သံယောင်တိုင်တည်စကား ၁၁. လောကကိုစိန်ခေါ်ခြင်း ၁၂. ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝ Click Me Mirrorcreator Much Credit : Ms. KHH
June 13, 2011 လူသား အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ခိုင်ထူး Myanmar Artist2Comments
ရွှေလည်တိုင် -^- ခိုင်ထူး
ဒီအခွေလေးကို တေးချစ်သူများ ဆုံစည်းရာနေရာလေးမှာ ပြန်လည်တင်ပေးခွင့်ရတဲ့ အတွက်ကိုတော့ ရင်ထဲမှာ တကယ်ကိုပဲ ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီသီချင်းခွေက ကျွှန်တော် ခိုက်တဲ့ သီချင်းခွေဖြစ်တာက တစ်ကြောင်း၊ ပြီးတော့ နားမထောင်ဖူးသေးသူများ နားထောင်စေချင်လိုတဲ့ ဆန္ဒလေးကလွှဲလို့ တစ်ခြားဘာရည်ရွှယ်ချက်မှ အလျဉ်းမရှိပါ ခင်ဗျာ။ ဒီလိုတိတ်ခွေကနေ ပြန်ပြီး ဒီအဆင့်အထိ နားထောင်လို့ရအောင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီး အင်တာနက်ပေါ်တင်ပေးခဲ့တဲ့၊ စေတနာထားပေးကြတဲ့ ဆရာကြီးများကိုလည်း ဒီနေရာကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျွှန်တော် လူသားမှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ။ အလွှင့်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း ဆက်ဆက်ဆုံမဲ့ ဆောင်း ရွှေလည်တိုင် သိနှင့်နေသား ရွှေလီသဲသောင် အားလုံးက သိကြပါတယ် ကာရန်မဲ့ ပန်းချီ အတ္တသမားသို့ နှင်းဝေတဲ့ ဆောင်း မင်းအနားမှာရှိနေမယ် ပျောက်ဆုံးသွားသော အလှသစ္စာ နားလည်သူ အလှည့် လင်နဲ့ … Continue Reading →
May 19, 2011 လူသား အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ခိုင်ထူး Myanmar Artist Myanmar Oldie Albums3Comments
ခိုင်ထူး – အကောင်းဆုံးတေးများ (တစ်ကိုယ်တော်)
တေးသံရှင် ခိုင်ထူး ရဲ့သီချင်းများ စုစည်းမှု ဖြစ်ပါတယ်….။ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့…တန်ဖိုးရှိတဲ့ …..သီချင်းများ ဖြစ်တာက တစ်ကြောင်း….၊ တချို့ သီချင်းတွေရဲ့ နာမည်တွေကို … အသေအခြာ မသိရှိတာက တစ်ကြောင်း…၊ ကိုယ်တိုင် ပြီးပြည့်စုံအောင် နားမထောင်ဖြစ်သေးတာက တစ်ကြောင်း…စသည့် အကြောင်းကြောင်းတို့ ကြောင့် တန်ဖိုးရှိသော သီချင်းများ….နာမည်တလွဲတချော်ဖြစ်မှာ…စိုးရိမ်မိသည့်အတွက်ကြောင့်… သီချင်းနာမည်များ ရေးထားပေးနိုင်ခြင်း မရှိသည်ကို ခွင့်လွတ်ပေးပါရန်နှင့်…. တေးချစ်သူများ….တေးချစ် ပရိတ်သတ်များကို တောင်းဆိုချင်တာလေး တစ်ခုကတော့….၊ တေးသီချင်း နာမည်များကို တတ်နိုင်သလောက်…သိသလောက်…ပြန်လည်ပေးပို့ ပေးပါရန်… တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်… ခင်မင်လျက်… . Thanks, Dr.TT & Dr.THM (Ko Thaw Gyi) . Download Link
December 23, 2008 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ခိုင်ထူး Myanmar Artist 1 Comment
ခိုင်ထူး – ခေတ္တာ (တစ်ကိုယ်တော်)
December 23, 2008 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ခိုင်ထူး Myanmar Artist Leaveacomment
ခိုင်ထူး – ခတ္တာနှင့် အကောင်းဆုံးတေးများ
၁။ သံစဉ်နဲ့ အတူ ၂။ တစ်ရံတစ်ခါဆီ ၃။ သီချင်းတစ်ပုဒ် ပန်းတစ်ဆုပ် ၄။ ခတ္တာ ၅။ ဘယ်သူမှ မကောင်းဘူး ၆။ နေညိုချိန် အတွေး ၇။ စပျစ်ရည်ချိုနောက်က မေ့မျက်ရည် ၈။ စစ်ကိုင်းလမ်း ၉။ လေးမြားတစ်လက်နဲ့ သီချင်းသည် ၁၀။ အိမ် အလွမ်း ၁၁။ လိုရင် အကုန်လုံး ယူ ၁၂။ ဆက်ဆက်ဆုံမယ့် ဆောင်း ၁၃။ သိလား ၁၄။ လိုနေတဲ့ ငြမ်း
October 20, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) ခိုင်ထူး Myanmar Artist Leaveacomment
ခိုင်ထူး – အကောင်းဆုံးတေးများ
၁။ အဉ္စလီ ၂။ သီချင်းငှက် ၃။ စိုးစံစားစေ ၄။ စစ်ကိုင်းလမ်း ၅။ သီချင်းတစ်ပုဒ် ပန်းတစ်ဆုပ် ၆။ အားနည်းချက် ၇။ အဝေးဆုံး ၈။ သိလား ၉။ ပြီးပြည်.စုံတဲ့ဘ၀ ၁၀။ ဘယ်သူ.မှမကောင်းဘူး ၁၁။ နေရာဟောင်း ၁၂။ အချစ်သီချင်း